Niagara Falls Tour avy any New York | Fitsangatsanganana tanteraka
Fitsangatsanganana tanteraka | | New York
New York City, fantatra amin'ny anarana hoe tanàna tsy matory, dia iray amin'ireo tanjon'ny nofinofin'ny mpandeha maro. Raha mandeha mora foana ity tanàna lehibe ity dia ilaina ny mandany herinandro farafahakeliny any, koa mitady fotoana hahitana toerana mahaliana, toy ny ny Niagara Falls malaza.
Ny drafitra raha ny amin'ny fahitana an'i New York dia tsy misy farany. Manomboka amin'ny fitsidihana takiana amin'ny Empire State Building, miaraka amin'ny fahitana ny tanàna avy any ambony, ka hatramin'ny seho mozika iray eny Broadway, mandehandeha eny amin'ny eran'ny Times Square na mahita ny Bridge Bridge. Ao amin'ny Big Apple dia afaka mankafy ianao, eny, natiora vitsivitsy noho ny havokavoka maitso lehibe izay Central Park. Na izany aza, ireo tsy tia ny habaka maintso dia mety tsy hahita ny halehiben'ny tontolo voajanahary.
Izany no antony anoloranay anao a Fitsidihana mahagaga sy tsy hay hadinoina Niagara Falls avy any New York.
1 Ahoana no ahatongavana any amin'ny Niagara Falls
2 Inona no ho hitanao amin'ny fitsidihana an'i Niagara Falls
3 Fa maninona no mendrika izany
Ahoana no ahatongavana any amin'ny Niagara Falls
Tena nahagaga ny Niagara Falls, koa aza hadino ny fotoana hanatonana azy ireo. Mba hanamorana izany dia azonao atao ny mamandrika fitsangatsanganana amin'ny teny espaniola ao amin'ny Tranonkala Hellotickets, mba tsy hanahirana antsika afa-tsy ny mankafy ny tontolo.
Any amin'ny 660 kilometatra miala eo akaikin'ny tanànan'i Toronto sy ny sisin-tanin'i Kanada no misy ilay riandrano. Mety ho azon'ny fiara izy ireo izay maharitra enina ora, amin'ny bus, miaraka amin'ny dia adiny folo eo ho eo, na amin'ny fiaramanidina, miaraka amin'ny dia adiny roa eo ho eo. Miaraka amin'ny fitsidihana mitarika anao dia ho tonga mialoha ianao, ao anatin'ny adiny fito na valo, ankoatry ny fampiononana fanampiny tsy hanahirana na inona na inona ary ho fanampin'ny fahalalana ny tantara sy ireo teboka mahaliana rehetra nefa tsy mila mandamina ny zavatra rehetra mialoha.
Inona no ho hitanao amin'ny fitsidihana an'i Niagara Falls
Amin'ny fitsangatsanganana mankany Niagara Falls avy any New York dia hasehon'izy ireo amintsika ny zavatra rehetra ho hita.
Ny Niagara Falls State Park dia manome antsika fomba fijery mahaliana hahitana ireo riandrano telo, miaraka amin'ny fomba fijery tonga lafatra amin'ny fakana sary. Hellotickets dia misy koa ny fitsangantsanganana fantatra amin'ny anarana hoe Maid of the Mist, miaraka amina fitsangantsanganana an-tsambo eo akaikin'ny riandrano izay miainga avy amin'ny faritra amerikana.
Amin'ny diany mankany amin'ny riandrano dia afaka mandeha amin'ny làlana mamakivaky ny Niagara Gorge ianao, miaraka amin'ireo làlambe izay manana halava samy hafa ary mamela ny fidirana amin'ireo tontolon'ny manodidina.
Teboka iray hafa hitsidihana ny fitsidihana an'i Niagara Falls dia ny Nosy Goat, nosy iray eo afovoan'ny riandrano izay misy ny sarin'ny mpamorona Nikola Tesla sy ny fijerin'ny Terrapin Point.
Fa maninona no mendrika izany
Ny dia iray toa ilay mitondra antsika any New York dia lava ary mila fandaminana maro. Ny fikarakarana fitsangatsanganana mankany Niagara Falls avy any New York dia hevitra lehibe iray, satria lava be ilay dia ary mety ho sarotra raha atao amin'ny fiara na bus raha tsy misy ny fitarihan'ireo izay mahalala ny faritra.
Ny fitsangatsanganana karakarain'i Helloticket dia manome antsika fahafaha-misafidy fonosana isan-karazany amin'ny fitsidihana iray na andro maromaro, hahalalanao ny toerana malalaky ny riandrano nefa koa ireo tanàna toa an'i Philadelphia na Toronto. Amin'ireto fonosana ireto dia mitsidika ireo toerana mahaliana rehetra amin'ny riandrano, manomboka amin'ny Nosy Goat ka hatrany amin'ny Niagara Gorge. Tsy ho diso anjara amina hetsika na habaka izahay ary ho afaka hijery an-tsipiriany ity tontolo mampino ity.
Na ho an'ireo tia natiora na ho an'ireo izay mankafy manao tatitra an-tsary amin'ny toerana tena kanto, ity fitsangatsanganana ity dia tena ilaina izay tsy maintsy ampiana rehefa manao ny dia any New York.
Amin'ireto fitsangatsanganana an-tsambo ireto dia tsy maintsy misoratra anarana fotsiny isika, misafidy ny fitsangatsanganana miaraka amin'ireo hetsika rehetra ataony ary hanokana ny fotoanantsika rehetra hifalifaliana amin'ity tontolo mahavariana ity. Ho traikefa tsy hay hadinoina io!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Niagara Falls Tour avy any New York
Inona no hatao any Berlin